China Industry News Factory - Lixabiso Industry News Supplier, Umthumeli - Inxalenye 2
Umlilo US Hoverboard wabangela ukufa omnye nokwenzakala ezimbini
ixesha Post: 03-15-2017
Ngokutsho US eendaba ingxelo ngoMatshi 11, 2017, e-Harrisburg mzi ngenxa hoverboard umlilo ugqabhuko ngesiganeko kukhokelele ekuswelekeni komntwana, amantombazana amabini bonzakala, ukongeza abacimi abalimele. Ngokutsho abacimi ezichazwe, ngo-8 ebusuku, ukuze ukubaleka, omnye ngamaxhoba ukusuka ...Funda ngaphezulu »
Electric Hoverboard yenza ubomi nje ngakumbi & free
ixesha Post: 03-07-2017
Kule mihla, ezemidlalo uye waba imisebenzi owuthandayo gens ofisi, abasebenzi abamhlophe-ikhola kwi-ofisi, ngomhla we computer, iinxalenye nganye emzimbeni ukungazilolongi, ukungazithembi, ngokukodwa iingxaki ezahlukeneyo ezingephi kwiinkalo ezahlukahlukeneyo zomzimba, ezifana entanyeni ezinobubi, isandla mouse, amehlo ezomileyo, vumeli ...Funda ngaphezulu »
Ubudlelwane phakathi ul 2272 Ukuqinisekiswa & Hoverboard
ixesha Post: 02-07-2017
Hoverboard obizwa ngezithuthuthu self-balancing, ngenxa kwiminyaka edlulileyo 'hoverboard ngesiganeko umlilo, I-US Consumer Product Safety Association (CPSC) ubhengeze ukuba zonke isithuthuthu self-balancing okanye Hoverboard abenzi, abathenga kunye abasasazi izithuthi counterbalanced kufuneka athobele .. .Funda ngaphezulu »
Le eziluncedo eqhuba hoverboard
ixesha Post: 12-26-2016
Hoverboards athandwa kakhulu namhlanje yaye iye yaba trend for kids, ulutsha kunye aults ukuba athabathe uhambo olufutshane ngebhalansi self eyoyikekayo hoverboard.If ufuna ukuthenga izandla hoverboard simahla abantwana, abahlobo okanye wena, ungafumana Inkcukacha ezininzi kwi internet ngokuphathelele ivili 2 ...Funda ngaphezulu »
Kwakutheni ukuze scooter yombane okanye Rubber njalo yamkele emarikeni?
ixesha Post: 12-14-2016
Faka kunyaka omtsha, intsalela ukhuphiswano endle scooter yombane ngokuya ikrakra. abenzi ezinkulu ziye zenza iimveliso zabo ezintsha, qhubeka sokudibanisa nokwandisa impembelelo yayo kunye nobume kule nkonzo. Umbhali usoloko ingqalelo ukuba nomnye waba baququzeleli ezibalulekileyo ...Funda ngaphezulu »
Kutheni scooter balance umsebenzi bhokisi ezimhlophe-ikhola ngayo?
ixesha Post: 11-22-2016
Xa uqala ukuya emsebenzini, yintoni na ekoyikisa kakhulu? Ndiyakholwa ukuba abantu abaninzi baya kuthi ukuba emva kwexesha, ngaphandle kokuba bayachatshazelwa unyango ngokungenabuntu endleleni yabo eya emsebenzini. Abantu abaninzi baye emsebenzini ngebhasi sikaloliwe ukhwele, Kakade ke, ungakhetha ukuba uhambe. Phakathi bobathathu kubo disadv yabo ...Funda ngaphezulu »
Ngaba uyazi ezi ngcebiso luncedo balancing KANTI ukugcina?
ixesha Post: 11-03-2016
Zingaphi na uyazi ukuba balancing KANTI ukugcina amacebiso? Namhlanje ke Koowheel Umhleli ukwethula kuwe. Indlela yesondlo Ukulinganisela Isithuthuthu okanye hoverboard: 1. Ukusetyenziswa Koowheel balancing scooter ayikwazi ingohlulwa indima kwevili, ngoko ke kufuneka senze inspecti elifanelekileyo ...Funda ngaphezulu »